Poker waa qoys ka mid ah ciyaaraha kaararka oo isku daraya khamaarka, istiraatiijiga, iyo xirfad. Dhammaan garsoorayaasha ciyaarta waxay ku lugleeyeen sharraxa qayb ka mid ah cayaarta, waxayna go'aamiyaan guuleystayaasha gacan kasta oo ay ku xiran tahay isku-dhafka kaararka ciyaartoyda, ugu yaraan qaar ka mid ah oo weli qarsoon ilaa dhamaadka gacanta. Ciyaartoyda Poker waxay ku kala duwan yihiin tirada kaararka la qabtay, tirada kaarka la wadaago ama "kaarka bulshada", tirada kaararka harsan, iyo hababka tartanka.
Inta badan ciyaaraha khamaarka casriga ah, wareegga koowaad ee tartanka waxa uu ku bilaabmayaa mid ama in ka badan oo ka mid ah ciyaartoyda sameeya nooc ka mid ah shuruudaha lagu qasbay (indhoolaha ama ante). Ciyaartii caadiga ahayd, ciyaaryahan kasta ayaa ku sharfay sida ay u kala horeeyaan, waxay aaminsanyihiin in ay gacantoodu ku haboon tahay marka la barbardhigo ciyaartoyda kale. Ficilku wuxuu markaa sii wataa saacad ahaan iyada oo ciyaaryahan kasta uu ubaahan yahay mid isku mid ah (ama "wac") ugu dambeyntii hore, ama laab, luminta khidmadda ilaa iyo fog oo dhan. Ciyaaryahan kale oo isku dheelitiran ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu "kor u qaado" (koror) khadka. Xilliga tartanka ayaa ku dhamaanaya marka ciyaartoyda oo dhan loo yaqaan 'bet-ka ugu dambeeyay' ama la duubay. Haddii dhamaan hal ciyaaryahan oo isku dhejinaya wareega, qofka soo hadhay wuxuu soo qaadayaa dheriga isagoo aan looga baahnayn inuu muujiyo gacantooda. Haddii wax ka badan hal ciyaaryahan ayaa weli ku jira tartanka ka dib markii wareega ugu danbeeya ee tartanka, dhacdadu waxay dhacdaa meesha gacmaheeda la soo bandhigo, iyo ciyaaryahanka gacanta ku guuleysta wuxuu qaadanayaa dheriga.
Marka laga reebo shuruudaha ugu horreeya ee lagu qasbay, lacagta waxaa kaliya lagu dhejinayaa dheriga si ikhtiyaari ah oo ka mid ah ciyaaryahan aaminsan in qaan-sheegaha uu leeyahay qiime wanaagsan oo la filayo ama cida isku deyeysa inay ciyaarto ciyaartoy kale sababo istiraatiiji ah oo kala duwan. Sidaa darteed, iyadoo natiijada gacan gaar ah ay si aad ah ugu lug leedahay fursadaha, rajada mustaqbalka dheer ee ciyaartoyda waxaa go'aaminaya ficiladooda ay doorteen iyadoo loo eegayo astaamaha, cilmi-nafsiga, iyo aragtida ciyaarta.
Poker ayaa kor u kacday tan iyo bilowgii qarnigii 20aad waxayna ka soo baxday asal ahaan waxqabadyo madadaalo ah oo ay ku jiraan kooxo yaryar oo xiiso u leh hawlaha caanka ah, labadaba ka qaybgalayaasha iyo daawadayaasha, oo ay ka mid yihiin online, ciyaartoy badan oo xirfad leh iyo malaayiin dollar abaalmarinta tartanka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Poker&oldid=224559"